Mogadishu Journal » Wararkii ugu danbeeyay shirka madaxda dowlad gobolleedyada
Wararkii ugu danbeeyay shirka madaxda dowlad gobolleedyada
Mjournal :- Magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland waxaa maalintii labaad ka socda shirka Madaxda maamul gobaleedyada oo xalay halkaas ka furmay.
Madaxda ka qeyb galaysa, shirka ayaa maanta doodo adag ka yeeshay ajendaha laga wada hadlayo oo ah khilaafka dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada iyo sidii meesha looga saari lahaa.
Madaxweynaha Martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed islaam (Madoobe) ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto dhibaato dhinac walba leh oo saameysay Xasiloonida iyo Maamulka Dowladnimada isagoo talooyin dhaxal gal ah u soo jeediyay dhinacyadii shirka ka soo qeyb galay.
“Masuul walba oo naga mid ah kursiga ma sii joogi doono laakiin waa in aan ka tagnaa taariikh dhaxal gal ah oo aan ka shaqeynaa samata bixinta Dalka iyo dadka haddii aanan awoodina waa inaan kaga sii darin” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxaa la filayaa in markii uu dhamaado shirkan la soo saaro qodobo ay ku heshiiyeen Madaxda maamul Gobaleedyada kuwaasoo ku saabsan habka wada shaqeynta dowlada dhexe iyo hab raaca xalinta khilaafaadka jira.
Madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa shalay gaaray magaalada kismaayo, halkaa oo ay uga qeyb galayaan shir uu ku baaqay madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madobe.
Dowladda fedraalka ayaan wali si rasmi ah uga hadlin shirka ka socda magaalada Kismaayo, waxaana jira walaac ka dhashay shirkani maadaama aysan ka qeyb gelin dowladda dhexe.
Inkastoo aan la ogeyn waxa kasoo bixi kara shirkani ayaa haddana dadka qaar waxaa ay qabaan in shirkani uu walaac horleh ku keeni karo wada shaqeynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Murankii ka dhashay mowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa keenay in qaar kamid ah madaxda maamulada laga qaado xilka.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday midka saamaynta ugu xun uu murankan ku yeeshay, kadib markii madaxdii sarsare ee maamulkaasi ay ku kala qaybsameen mowqifka khaliijka.
Qaramada Midoobey oo baaq u dirtay madaxda Galmudug